ỌTỤMỌKPỌ ADỊZỊ NA SINETI? – hoo!haa!!
E jikwuzi ọtụmọkpọ achụ Onyeisi Sineti Naịjiriya bụ Sinetọ Bukọla Saraki? Ka Sinetọ Dino Melaye abịakwala ọzọ, ya na njakịrị ya na-akpụ ọkụ n’ọnụ?
Ihe a bụ ajụjụ ndi mmadụ na-ajụ ụnyahụ n’ọgbakọ Sineti mgbe Dino jiri nkachifu ọcha were hichaa oche Onyeisi Sineti tupu Saraki anọdụ ala were malite ọgbakọ.
Ihe a mere n’ihu madụ nile bịara chetara ndi mmadụ ihe mere oge gara aga, oge Chụba Ọkadigbo( Oyi)bụ Onyeisi Sineti mgbe ọ gwara ndi sinetọ ibe ya na ọkọrọtọ sineti (mace) nọzị n’arụsị be nna ya bụ Ogbunike na-eku ume, na-enwekwara nnukwu eke na-eche ya nche.
Oge ahụkwa, tupu Oyi anọdụ ala n’oche ya dịka Onyeisi Sineti, ọ na – ebu ụzọ were ọdụdụ ehi ọ na-eji pịachachaa oche ahụ, iji merụọ ihe ọbụla ndi iro ya mere ebe ahụ.
Dino na onwe ya kọwara na nkwụcha abụghị ụjọ, na ya mere nke a n’adịghị ama ama…….
Ihe ịtụnanya mere mgbe ndi Sineti malite nzukọ ụbọchị Tuuzdee ka ha nwechara ezumike ọnwa olemole. A tụrụ anya na njiji ga-eji n’ihi mgba ga-adị maka iwepụ Saraki n’ọkwa. Mana ndi Sinetọ jizi obi nwanne were na-eso onwe ha igosi na ha edoziela n’etiti onwe ha tupu ọgbakọ ahụ.
Ọzọkwa bụ na o gosiri na “Ndi Ọchịagha Ise” na-ekwu ihe na-eme n’obodo Naịjiriya, ndi ahụ wepụtara Atiku ka ọ zọọ ọkwa Onyeisiala na PDP enyela ụmụazụ ha, ndi ha tinyegasịrị na Sineti ntuzi aka sị hapụ Saraki.
Ahmad Lawan, Onyeisi otu ndọrọ ndọrọ ka n’ọnụ ọgụ na sineti onye nọ n’isi nkata a na-akpa maka iwepụ Saraki meziri ihe tụrụ ndi mmadụ n’anya. Mgbe o kuliri ikwu okwu, o kwuteghi okwu maka iwepu Saraki n’ọkwa kama okwu ya bụzị ịkpọ oku myigharị ọgbakọ.
Previous Post: NGWA ISI NRI (Condiments)
Next Post: Ọ ATIKU N’OKONJỌ-IWEALA?
Anyị nọ na-ekiri ejije a na-eme na Naịjirịa. Chukwu bụ ike anyị.